Computex 2022: TeamGroup Inozivisa T-Force Delta RGB DDR5-6600 CL34 uye DDR5-6000 CL30 Memory
Dai 29, 2022 by Justin26
Memory mutengesi TeamGroup yakazivisa maviri matsva eT-Force Delta RGB DDR5 memory kits panguva yeComputex 2022, iri kuitirwa muTaipei, Taiwan. Izvi zvinosanganisira yakakwira-frequency kit yakavharirwa kuDDR5-6600 ine latency yeCL34, pamwe neiyo yakaderera-latency kit inoshanda paDDR5-6000 CL30. Ose ari maviri anozowanikwa ari mutema kana chena uye anouya neRGB LEDs. Intel yaive kambani yekutanga kuunza… [Verenga zvakawanda ...] nezve Computex 2022: TeamGroup Inozivisa T-Force Delta RGB DDR5-6600 CL34 uye DDR5-6000 CL30 Memory
Maitiro ekudzima Auto Kupenya Windows 10 kana 11
Dai 29, 2022 by Martin6
Kana wakaneta zvako Windows 10 kana 11 PC chidzitiro chinowedzera kupenya kana kudzikira, zviri nyore kudzima. Chinongodiwa rwendo rwekukurumidza kuenda kuSettings. Heino maitiro ekuzviita. Kunzwisisa Windows Kupenya Otomatiki Tisati tatanga, zvakakosha kuti tizive kuti kupenya otomatiki (kana kuchinjika) kunongoshanda kune Windows zvishandiso zvine akavakirwa-mukati masikirini akadai ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekudzima Auto Kupenya Windows 10 kana 11
Apple Mepu matipi uye matipi: 14 zvinhu zvinobatsira kuwana zvakanyanya kubva pamepu
Apple Mepu yasvika kure kubva payakatangwa muna 2012. Nemakore gumi pasi pebhandi rayo, uye kumwe kuvandudzwa kukuru mumakore, pave nekupokana kwevashandisi veApple kuti vasarudze Apple Mepu pane imwe nzira seGoogle Mepu yakapihwa kubatanidzwa pamwe nemamwe ecosystem yeApple. Kune zvakare mamwe matipi makuru uye mateki mukati meApple Mepu ayo acha… [Verenga zvakawanda ...] nezve Apple Mepu matipi uye matipi: 14 zvinhu zvinobatsira kuwana zvakanyanya kubva pamepu
Foni yekupeta yeGoogle inonzi yakarohwa nekumwe kunonoka
Dai 27, 2022 by Justin26
Google yakanyanyisa-runyerekupe uye dzimwe nguva yakadzima kupeta smartphone, iyo Pixel Fold, inonzi ichiri mhenyu, asi haina matambudziko ayo. Mumushumo mutsva kubva kuKorea indasitiri saiti Iyo Elec uye muongorori wezvekutengesa Ross Young, zvinonzi kunyange Google Pixel Fold ichiri mhenyu, kugadzira kwayo hakuna matambudziko ayo sezvo iyo yekupeta smartphone yakarohwa ne… [Verenga zvakawanda ...] nezve foni yeGoogle yekupeta inonzi yakarohwa nekumwe kunonoka
Twitter shareholders faira kunyunyuta pamusoro paElon Musk, inotaura kunyengera kwemutengo wemasheya ekambani
Elon Musk's Twitter dhiri yakaisa kambani parollercoaster ride, uye izvo zvinosanganisira mutengo wayo wemasheya. The billionaire pakutanga aida kutenga $44bn, asi nyaya dzichangoburwa pakati peMusk neTwitter dzakaita kuti Twitter stock price inyure. Vagoveri veTwitter havasi kufara nazvo, zvichitungamira kumatare edzimhosva anoti Musk akanyengedza mutengo wemasheya wekambani kuti amubatsire ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Twitter shareholders faira kunyunyuta pamusoro paElon Musk, taura kunyengera kwemutengo wemasheya ekambani
Chrome Inodzivirira Makadhi Ako Echikwereti NeNhamba Dzakanaka
Dai 24, 2022 by Martin6
MaHackers nembavha vanoda nhamba dzekadhi rechikwereti, ndosaka masevhisi mazhinji akabuda pamusoro pemakore kuti agadzire nhamba dzeakadhi dzemakadhi ekutenga online inodzivirira ruzivo rwako chairwo. Google ikozvino iri kuvaka chimiro chakafanana muChrome uye Android. Basa idzva rakaratidzwa kuGoogle I / O neChitatu, iyo "ichawedzera imwe chengetedzo ne ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Chrome Inodzivirira Makadhi Ako Echikwereti NeNhamba Dzakanaka
KB5013943 May 2022 update iri kupaza maapplication pa Windows 11
Dai 24, 2022 by bartez64
Kana iwe ukaisa iyo yaMay 2022 yakawedzera yekuvandudza pa Windows 11, unogona kunge waona kuti akawanda emaapps aunoshandisa nguva dzese haasi kushanda sezvaaimboita. KB5013943, iyo inosungirwa kuchengetedza gadziriso, iri kupaza mamwe maapplication anoshandisa .NET framework. Mune zvimwe zviitiko, vashandisi vari kuwana kodhi yekukanganisa: 0xc0000135. Imwe nyaya yakafanana yakataurwa mune yekusarudzika yekuvandudza, asi yaive ... [Verenga zvakawanda ...] nezve KB5013943 May 2022 update iri kupaza maapps pa Windows 11
Microsoft Office haikwanisi kuvhura faira iri nekuti .zip archive file ivhezheni isingatsigirwe
Dai 24, 2022 by billy16
Sekureva kwevamwe vashandisi, kana uchiedza kuvhura imwe faira mune chero chirongwa cheMicrosoft Office senge Shoko, meseji yekukanganisa inobuda. Izvi zvinomisa mushandisi kuvhura kana kuona faira. Inotevera ndiyo meseji yemhosho chaiyo. Tine urombo. Hatikwanise kuvhura nekuti takawana dambudziko nezvirimo. Detail Microsoft Office haigone kuvhura iyi faira nekuti iyo… [Verenga zvakawanda ...] nezveMicrosoft Office haikwanise kuvhura faira iri nekuti .zip archive file ishanduro isingatsigirwe
Ndeipi Yakanakisa Antivirus ye Windows 10 uye 11? (Microsoft Defender Yakanaka Zvakakwana here?)
Windows 10 uye Windows 11 haizokunetse iwe kuisa antivirus senge Windows 7 akaita. Kubva Windows 8, Windows ikozvino inosanganisira yakavakirwa-mukati yemahara antivirus inonzi Microsoft Defender. Asi ndiyo yakanyanya kunaka kuchengetedza PC yako - kana kuti yakanaka zvakakwana? Microsoft Defender (yaimbova Windows Defender) yaimbozivikanwa seMicrosoft Security Essentials kumashure mu Windows 7 ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Chii Chakanakisisa Antivirus che Windows 10 uye 11? (Microsoft Defender Yakanaka Zvakakwana here?)
Maitiro ekushandura yako Android Foni kuita Mobile Wi-Fi Hotspot
Iyo smartphone ine inogara ichibatanidza internet yakanaka, asi zvakadini nezvimwe zvishandiso zvako? Isu tinokuratidza nzira yekugovana data rako nelaptop kana piritsi nekushandura foni yako yeAndroid kuita nhare yeWi-Fi hotspot. Yemahara yeruzhinji Wi-Fi isarudzo huru nguva zhinji, asi haiwanikwe kwese kwese uye inouya nematambudziko ayo. Dzimwe nguva, iyo yakanyanya kubatana yaunayo ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro eKushandura Foni Yako yeAndroid kuita Nharembozha yeWi-Fi Hotspot
Microsoft inogona pakupedzisira kugadzirisa Edge browser's hombe mamiriro menyu pa Windows
Sechikamu che Windows kuvandudzwa kwehwendefa, Microsoft yakagadziridzazve menyu yemukati yeChromium-based Edge uye yakawedzera saizi yayo. Parizvino, menyu yeEdge yemamiriro ekunze yakazara nesarudzo dzakawandisa uye yakakura zvisingaite, ine vashandisi vakati wandei vachinyunyuta nezvayo paFeedback Hub. Zvichienderana nezvaunodzvanya-kurudyi muMicrosoft Edge, menyu yemukati inosanganisira runyorwa rurefu rwe… [Verenga zvakawanda ...] nezveMicrosoft inogona kupedzisira ichigadzirisa Edge browser's hombe mamiriro menyu pa Windows